सहकारीमा धान भण्डारण पछि किसान खुशी, कृषिमा नगरलाइ अब्बल बनाउने योजना - Butwal Online
बुटवल उप महानगरले कृषि क्षेत्रमा अहिले सम्म के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ र कृषिविकासमा नगरले अगाडी सारेका योजनाहरूको काम कहाँ सम्म पुगेको छ । यस विषयमा बुटवल अनलाइन संग गरिएको कुराकानी ।
बरिष्ठ कृषि विज्ञ, बुटवल उपमहानगरपालिका ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले कृषिको क्षेत्रमा के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ ?
अहिलेसम्मका कुरागर्दा गत बर्षको तुलनामा यस बर्ष हामीले धेरै कामहरू गरेका छौं । सबैभन्दा राम्रो र उत्कृष्ठ काम त हामीले सहकारीमा धान धितो राख्ने कामको सुरुवात गरेका छौं । बुटवल उप–महानगर भित्र धान भण्डारण गर्ने ठाँउ नहुँदा किसानहरू मर्कामा परेका थिए । धानको उचित बजार मूल्य नपाउँदा किसानहरू चिन्तित थिए । हामीले त्यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै वडा नम्बर १७ मा रहेको सिम्रिक सहकारी संस्थाबाट यसको परिक्षण सुरुवात गरेका छौं । सुरुवातमा अहिले ५ हजार मेट्कि टन धान स्टोर गरिएको छ । यसका लागि नगरपालिका बाट केही प्रोत्साहन अनूदानको पनि ब्यबस्था गरिएको छ । यसबाट किसानहरूले धानको मुल्य पाउनेछन भन्ने बिश्वास लागेको छ ।
अन्य के के कायक्रमहरू अगाडी बढेका छन् ?
–यस्तो छ योजनाहरू त उप–महानगरले अहिले धेरै अगाडी सारेको छ । अहिले तत्काल सामुदायिक वनमा आधारित जीबिकोपार्जन कार्यक्रम , यसमाचाहि समूदायिक वनमा रहेका खेतियोग्य जमिनमा तरकारी खेती शखरखण्ड, बेसार, तरुल, पिडाँलु लगायतका वनको माटो परिक्षण गरि त्यही अनुसारका तरकारी खेतीगर्ने योजना लाई अगाडी बढाएका छौं । वनमा पोखरी निर्माण कार्यक्रम पनि हामिले अगाडी बढाएका छौ । वनमा तरकारी खेती अन्र्तगत रहेर अहिले सम्म उप–महानगरपालिका भित्रका ७ ओटा वनबाट प्रस्ताव आएको छ । यि कार्यक्रममहरू प्रभावकारी हुनेछन् भन्ने आशानगरले लिएको छ ।
कृषि उपार्जन हुने वडाहरू कुन कुन हुन ?
–वडा नम्बर ११ मा केही खेती योग्य जमिन छ, त्यहाँ खासगरि तरकारी खेती हुने गर्दछ । १२ र १३ मा पनि केही खेती योग्य जमिन छ । वडा नम्बर १४ देखि १९ सम्मको जमिन चाही यो उप–महानगरको खेती योग्य जमिन रहेको छ । यही जमिन प्रयोग गरेर कृषि विकास कार्यक्रमहरू अगाडी बढेका छन् अरू बाँकी वडाहरू त शहरी क्षेत्र भए र शहरभित्र पनि हामी कौशी तरकारी खेती भनेर कार्यक्रमहरू चलाएका छौं । वडा संगको सहकार्यमा जो नागरिक आफ्नो उत्पादनको हरियो तरकारी कौशी होस वा आफ्नो घरको छतमा फलाएर खान चाहानुहुन्छ वहाँहरूका लागिपनि तरकारीको बीऊ अनुदानमा बितरण गरेर सकेसम्म बिषादी रहित तरकारी सेवन गर्नतर्फ नगरपालिका हरदम लागि रहेको छ ।
उपमहानगरभित्र के के समस्याहरू छन् ?
–हो, पानी बिना हाम्रो दैनिक जीवनपूर्ण हुन नसके झै सिंचाईं बीना कृषिती प्रणालि सम्भव हुन सक्दैन । त्यसका लागि नगरपालिकाले तत्काल सञ्चालनमा नरहेका बोरिङहरू सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभाले सिंचार्इंका क्षेत्रमा केही महत्वपुर्ण निर्णयहरू गरेको छ । जस अन्र्तगत सेमलार क्षेत्रमा रहेका ७ ओटा बोरिङ मध्ये ५ ओटा सञ्चालनमा छैनन् मोतीपुर क्षेत्रको भैलो भुजामा १ बोरिङ छ त्यसले झण्डै ६० बिघा जमिन सिचाईं गर्छ त्यसको पनि मर्मत गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै नल्कुपका २ ओटा रहेका छन ्। अब अरू जम्मा ६ वटा बोरिङ छन् तिनी पनि सञ्चालनमा छैनन् । बोरिङको अवस्था अनुगमन गरि मर्मत सम्भार र सिचाईंको आवश्यक भएको क्षेत्रमा कामकोगति अगाडी बढिसकेको छ, अब सिचाईंको सुबिधाबाट कोही किसान बञ्चित हुन पर्दैैैन ।
बुटवल उपमहानगर कृषिमा के मा अब्बल बन्न सक्छ ?
–खासगरी तराईक्षेत्रमा उत्पादन हुने बाली तरकारीहरू उत्पादनमा लागि यहाँको माटो उपयुतm छ । जस्तै लौका ,सिमी , बोडी आलु पिडालु ।
नगर भित्र उत्पादनमा आधारित तरकारी खेतीका लागी दुई लाख बजेट निर्माण गरिएको छ । यसमा चाँही छतमा तरकारीखेती ,करेसाबारी योजना ,बिउ अनुदान लगायतका कार्यक्रम अगाडी सारेका छांै । यो कार्यक्रम प्रत्येक वडाको सिफरिसमा हामीले काम गर्दै आएरहेका छौं । बिभिन्न तालिमहरूको पनि आयोजना गरेका छौं ।
नगरले कृषि र कृषकहरूका हितका के कस्ता कानुन निर्माण गरेको छ ?
– हमीले निर्माण गरेका विभिन्न कानून र ऐनले पक्कै किसानलाई काम गर्नमा सहजता ल्याउनेछ भन्नेमा हामीले बिश्वास गरेका छौं । स्थानिय कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन ऐन २०७४, धान धितोराखी ऋण दिनेकार्यबिधि २०७५, कृषि समूह गठन तथा परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ निर्माण गरी हामीले काम अगाडी बढाएका छौं ।